Figure ukushushuluza iyona omunye yezemidlalo ethandwa kakhulu emhlabeni, edonsa ezandayo izingane - Champions esizayo, kanye ezithakazelisayo futhi emuhle ukubona ku-TV noma i-rink eqhweni.
Ukuvela sibalo ukushushuluza
I skates kuqala ku yensimbi abagijimi kwavela 13-14 eminyaka e-Netherlands, ngakho-ke ubhekwa ngukhokho sibalo ukushushuluza.
Ngemva ukubonakala skates of uhlobo olusha weza nokuduma, okuyinto emangalisayo nomthelela ekuthuthukiseni ngokushesha ezemidlalo, okuyinto ngalezo zinsuku lwalulinganiselwe ekuqinisekiseni ukuthi draw phezu eqhweni futhi ezihlukile ngaphandle kokulahlekelwa isimo enhle.
Isethi yokuqala imithetho sibalo ukushushuluza wadedelwa eNgilandi ngo-1772 futhi wabizwa ngokuthi "A Treatise phezu ukushushuluza." Konke eyaziwa ngesikhathi abavelele iye yachazwa. Ngakho, iGreat Britain kuvikelwe zabhalwa zonke izibalo okuyimpoqo sibalo ukushushuluza. Ngaphezu kwalokho, ngo-1742 kwabonakala imiphakathi yokuqala bemizimba, kuye kwakhiwa futhi evunywe imithetho esemthethweni mncintiswano.
Umuntu owasungula le isitayela yesimanje sibalo ngezicathulo ezemidlalo mlando ngazwi linye uyavumelana American Jason uHeinz. Nguye nendima enkulu e ukusakazeka kwalo emhlabeni wonke, futhi ikakhulukazi eRussia.
Ukuthuthukiswa sibalo ukushushuluza eRussia
Ngaphansi koMbuso isiRashiya, sibalo ukushushuluza kwaba ethandwa kakhulu phakathi nesikhathi uPetru mina, owakhuphula amasampula lokuqala skates esuka eYurophu. Kuyaphawuleka ukuthi uMbusi Russian waba ngowokuqala beveza skates abethela ngqo esicathulweni futhi wadala, empeleni sibonelo of skates yesimanje.
Leli bhukwana kuqala Russian ngokuba bemizimba waphuma e 1838 Petersburg wabizwa ngokuthi "Winter mnandi futhi art ukushushuluza", ihlanganiswe umfundisi yokuzijwayeza esikoleni lempi GM Pauli.
Njengoba isibalo ngezicathulo Russia wabonakala ngo-1865, futhi ngesikhathi esifanayo kuleli Yusupov engadini rink wokuqala wavulwa Petersburg. Ngaleso sikhathi wayesevile eminyakeni engu ukhululekile kakhulu sihlanganisa lonke izwe laseRussia, futhi ngokushesha waba inkundla ukuqeqeshwa sibalo bemizimba. Futhi ngo-1878 sasiqhutshelwa mncintiswano kuqala phakathi abasubathi Russian.
Eyokuqala Russian nawaseSoviet sibalo bemizimba
I bemizimba wokuqala Russian beqale avele ngasekupheleni kwekhulu le-19. Pioneer ababa nesandla ku imincintiswano international, baba AP Lebedev, okwakuwuphawu kumiswa ummeli.
UNikolai Poduskov kakade yaba ilungu mncintiswano lokuqala olusemthethweni, okuyinto lwenziwe ngo-1896 futhi wathatha isikhundla 4th e ibalula ngezicathulo, kodwa kakade wathatha indawo yokugcina endaweni evulekile ubuqhawe Russian ngo-1901.
George Sanders, ngekubamba lichaza imincintiswano efanayo Poduskov lathethwa 3rd futhi baba nethusi umklomelo-winner. Ngaphezu kwalokho, wenza bobunjwa lokuqala eziyinkimbinkimbi, eyayizonikezwa, ngokusiza bona omunye odumile Russian sibalo skater - Nikolai Panin, abenza kubo eMidlalweni Yama-Olympic ngo-1908 London, win lokuqala Russian-Olympic "igolide".
Amaqhawe Soviet abaye imiklomelo eliphezulu lapho imincintiswano ehlukahlukene e sibalo ukushushuluza, le Sergei Chetverukhin eyaziwa best (Isiliva-Olympic Games in Sapporo, ithusi World Championship 1971 esiliva indondo at Championships izwe e Calgary (1972) kanye Bratislava (1973) kanye nethusi eliningi elingenakulinganiswa ngesikhathi Championships European ngo-1969 ngonyaka) no-Sergey volkov (ngo-1975 - iqhawe emhlabeni, iqhawe eU.SSR ngo-1974 no-1976).
Famous bemizimba Russian leduna ukushushuluza
Famous Russian sibalo bemizimba baye baba ompetha futhi imiklomelo at imincintiswano ehlukahlukene - kusukela Olympics ukuze Championships emazingeni ahlukene, futhi Grand Prix Cups.
Omunye lokuqala bemizimba engcono eRussia lezwakala Alexei Urmanov - winner amaningi futhi iqhawe zase-USSR, Russia nase-iqhawe European, i-Olympic iqhawe ngo-1994.
Ngesikhathi 1998 Olympics Russia futhi got a uzothatha indondo yegolide sibalo ukushushuluza zabesilisa, okuyinto unqobile Ilya Kulik. Ngaphezu indondo-Olympic eziphakeme kunazo zonke, ku arsenal of the edumile Russian sibalo skater iyona "igolide" we ubuqhawe Russia, "isiliva" futhi "ithusi" Umhlaba futhi Championships European.
Omunye edume kakhulu futhi engcono abasubathi isiRashiya Alexei Yagudin, ngubani umklomelo eyinhloko athlete - "igolide" imidlalo yama-Olympic-2002. Uyena European futhi iqhawe emhlabeni amaningi, owawina Grand Prix sibalo Final ukushushuluza.
Ayikho skater kancane ezidumile abasha skater-olulodwa Maxim Kovtun, ebangela okunye ukunqoba ezinkulu. He is a winner emithathu nesikhathi ubuqhawe iRussia yathatha "isiliva" ngesikhathi 2015 Championships European.
I kunazo owaziwa futhi imiklomelo sibalo skater eRussia futhi emhlabeni wonke Evgeni Plushenko. He is umnikazi ezimbili iMidlalo Yama-Olympic igolide izindondo (2006 - ibalula 2014 - ethimbeni sibalo ukushushuluza), wathatha kabili "isiliva" Olympic Games. Plushenko izikhathi 3 won isihloko emhlabeni kasikhombisa - iqhawe eYurophu, futhi kakhulu ngendlela 10 izikhathi - ubuqhawe Russian. Ubuye ezinye imiklomelo eminingi futhi izihloko.
Plushenko enezinto eziningi impumelelo yezemidlalo, futhi lokuhweba wakhe kwaba ukusebenza imincintiswano eziqine ku olulodwa ukushushuluza izibalo. Zilingane kuye akukho.
Russian sibalo bemizimba, amadoda abhekwa phakathi best in the world.
Famous Russian zesifazane solo oyiculayo
Ngeshwa, sibalo labesifazane ngezicathulo Russia abakwazi ukuqhosha enomlando omude wokukhonza ukusebenza kanye nemiklomelo kulo mdlalo.
Umlando zokunqoba waqala kuphela 1976 nge nokubonakala skater sibalo Elena Vodorezova. Ukuthi won umklomelo wokuqala e-Championship European, futhi kamuva waba ingxenye yesithathu ubuqhawe nezwe.
indondo Okokuqala-Olympic - "ithusi" - wawina ibalula skater Kira Ivanova ngo-1983.
Impumelelo skater weza kuphela uma okokuqala emlandweni Russian Irina Slutskaya won 1996 European Championship. Futhi kakade ngo-1999, futhi ngaleso Championships European, Maria Butyrskaya, Soldatov futhi Volchkov iwine zonke imiklomelo. Ngawo lowo nyaka Butyrskaya baletha "igolide" World Cup.
Naphezu kweqiniso lokuthi bemizimba engcono Russian Maria Butyrskaya futhi Irina Slutskaya awavelanga, bayizithunywa skater edume kakhulu futhi edume Russia kuze kube yilolu suku.
Abaholi balezi Russian zabesifazane sibalo ukushushuluza manje Julia Lipnitskaya futhi Adelina Sotnikova.
Sotnikova, owokuqala kude kangaka nje, wanqoba i-Olympic indondo yegolide e sibalo ukushushuluza phakathi kwabesifazane. Ngaphezu kwalokho, kwaba izikhathi ezingu-4 owawina Championships isiRashiya, kabili iwine isiliva Championships European.
Ochwepheshe Figure Skating prodigy ngokuthi Adeline, ngoba iminyaka engu-13-ke ngacula izakhi eziyinkimbinkimbi kakhulu sibalo ukushushuluza.
Julia Lipnitskaya ubuye igolide medalist-Olympic mncintiswano ithimba. Ngaphezu kwalokho, ine imiklomelo emahlelweni ahlukene endlunkulu kanye European Championship, kuhlanganise junior.
Julia manje iminyaka engu-17, Adeline - 19, futhi kukhona ikusasa ukushushuluza zabesifazane olulodwa Russia.
Russian pair ukushushuluza ngesikhathi iziqu, zobungoma futhi izwe bemidlalo abadumile ithwala okuningi kuka abangashadile.
Russian pair bemizimba ngegama futhi abantu bazi ngisho nalabo Sikude kakhulu emhlabeni kwezemidlalo.
Eyokuqala-Olympic "igolide" Umbhangqwana wethu Oleg Protopopov futhi ULyudmila Belousova iwine ngo-1964 nango-1968. Bangabakhe zabhalwa izakhi eziningi, okuyinto kuze kube yilolu suku zifakwe ohlelweni ayimpoqo yamakhonsathi emhlabeni wonke. Nakuba lo mbhangqwana nguye ayegibela indlela kungekho omunye umuntu owayekwazi.
Omunye umbhangqwana, wanqoba ama-Olympics babe Alexei Ulanov futhi Irina Rodnina - ngo-1972. Okulandelayo Igolide Irina Rodnina Won kakade ibhangqwe Aleksandrom Zaytsevym ngo-1976 no-1980 ..
Isenzakalo esidume kunazo zonke Russian sibalo bemizimba - Olympic e pair ukushushuluza kuba:
- Anton Sikharulidze futhi Elena Berezhnaya ;
- Maxim Marinin futhi Tatiana Totmianina ;
- Roman Kostomarov futhi Tatiana Navka.
Abaholi ababili ngezicathulo namuhla Russian sibalo bemizimba Tatiana futhi Maxim Trankov Volosozhar, e yefa vele 2 "igolide" imidlalo yama-Olympic (ngababili kanye nethimba mncintiswano) futhi azithele ngabandayo yethu ngeke zibavimbe.
Top pair ice umdanso
Ice ukudansa njengendlela isiyalo ahlukene kwahlanganiswa uhlelo imincintiswano international kuphela ngo-1950.
Kulolu hlelo, Russia (i-Soviet Union) emelelwa umbhangqwana abadumile Alexander Gorshkov futhi ULyudmila Pakhomov, ngubani yisendlalelo emhlabeni umdanso, futhi izikhathi 6 iqhawe emhlabeni futhi unqobe igolide kuma-Olympics 1976.
Okokuqala, IRussia, edumile ukudansa pair Oksana Grischuk futhi Evgeny Platov kwaba medalist kabili igolide ngo-1994 nango-1998 lokho kwawenza Amaqhawe in the mdlalo.
Akwaziwa umusi Maxim Shabalin futhi Oksana Domnina, phakathi impumelelo ukuthi babe zethusi Olympics 2010 Double Gold European Championship kanye Umhlaba Champions 2009.
Ezinye abadansi edume kakhulu abasha, Nikita Katsalapov no-Elena Ilinyh, baletha endlini yengcebo indondo futhi Russian-Olympic "igolide", "isiliva" nelithi "ithusi" Championships yeYurophu neRussia. Lo mbhangqwana behlukana ngemva Olympic ngo Sochi ngo-2014.
Kuze kube manje, the best, eziqine futhi edumile Russian sibalo bemizimba dancing eqhweni - Dmitri Soloviev Ekaterina Bobrova - Champions of Europe neRussia.
Kendall Jenner: ukuphakama, isisindo, Biography futhi Umsebenzi
Elena Gorbunova, unkosikazi Borisa Berezovskogo: Biography, izithombe
Vyacheslav Mavrodi: Biography nesithombe
Okuqukethwe umthetho "Ngo zabasebenzi izimpesheni in Russian Federation"
A kwenhliziyo evamile omdala nezingane. ngeziphambeko Okungenzeka kanye nemingcele
Izindawo White emphinjeni: izimbangela
Yokungezwani komzimba ukuze uju? Kusekhona ezinye izindaba ezinhle!